Handy Web | Web Design & Freelance Writing
Web Design services for Small Business, Online Shopping and Organizations
Content Management Services for your websites and social media on web
Professional Graphic Design for Web
Logo design, Banner ads and Business card graphic design services
Translation and transcription from English to Burmese, and copy writing
Havealook at how we works. Enjoy your days!
Welcome to Handy Web for your dream!
We are formed withagroup of professionals specializing in web design, freelance writing and translation, and professional graphic design for your business.
အွန်လိုင်းမှာ လူကြီးမင်းရဲ့ လုပ်ငန်းအကြောင်းကို တင်ထားခြင်းဖြင့် မည်သူမဆို လူကြီးမင်းလုပ်ငန်းရဲ့ ပစ္စည်းများအကြောင်းကို ဖ...
လူကြီးမင်းတို့ ကုမ္ပဏီလိုအပ်နေတဲ့ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ Handy Web ကနေ ဖန်တီးရေးဆွဲပါရစေ။ လူကြီးမင်းရဲ့ ၀က်ဘ်...
လူကြီးမင်းတို့မှာ ၀က်ဆိုက်မှာတင်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားမဂ္ဂဇင်းနဲ့ ဂျာနယ်တွေမှာ သုံးချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ေ...
လူကြီးမင်းလုပ်ငန်းရဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ဆိုရှယ်မီဒီယာ စာမျက်နှာတစ်ခု ဥပမာ Facebook Page၊ LinkedIn နဲ့ Twitter တစ်ခ...
ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ ရုံးမှာသော်လည်းကောင်း၊ အွန်လိုင်းမှာသော်လည်းကောင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ကြိုတင်ချိန်းဆို လိုပါက Book now! ကို နှိပ်ပါ။
စားသုံသူအယောက်စီတိုင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ပေးအပ်နိုင်တာတွေကတော့....
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပထမဆုံးတန်ဖိုးထားတဲ့အရာကတော့ အရည်အသွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်တင့်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ လူကြီးမင်းလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကြိုးစားမှုဟာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကို အခြေခံပါတယ်။
Client focus (သုံးစွဲသူဗဟိုပြု)
လူကြီးမင်းရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မျှော်မှန်းချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၀ဘ်ဆိုဒ်ဆိုတာ စာမျက်နှာတွေအများကြီးပါတဲ့ ဒိုမိန်းတစ်ခုဆိုတာ သိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ သိသင့်ပေမယ့် မသိကြတဲ့ ၀ဘ်ဆိုဒ်ရှိခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အ...
Marcus0Blogs blog, website
အမေး။ ကျွန်တော်ရဲ့ လုပ်ငန်းက သေးသေးလေးပါ။ ၀န်းထမ်းကလည်း နှစ်ယောက်ပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကလည်း အွန်လိုင်းက ရောင်းလို့မရဘူး။ ကျွန်တော် ၀ဘ်ဆိုဒ် လုပ်သင့်သလား။ အဖြေ။ ဒါက အလွန်ကောင်းတဲ့ မေးခ
Marcus0Blogs blog
ကျနော်တို့ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ… ကျနော်တို့ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ရယူလိုပါက Contact us! မှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ဖုန်းဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ လက်ခံရရှိပြီးချင်း ကျနော်တို့
ဘာသာပြန်စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကပြန်ရတာကတော့ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အကြောင်းနဲ့၊ သူတို့ရဲ့ အားသာချက်တွေကို ဖော်ပြပေ...
www.entrepreneurs-mm.com ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို WordPress ရဲ့ Courage Theme ကို သုံးထားပါတယ်။ ဘလော့ပုံစံလည်းဖြစ်တဲ့ အပြင် တချို့ေ
ကျွန်ုပ်တို့ ဖောက်သည်များရဲ့ စကားသံများ...
ကျွန်တော်ရဲ့ Entrepreneurs in Myanmar Website ကို ကောင်းစွာဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ အရောင်အယူအဆကော၊ နောက်ပြီး ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ Home Page မျိုးပါရအောင်လို့ လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Handy Web ရဲ့ Web Design ၀န်ဆောင်မှုကို ကျေနပ်အားရမှုရှိပါတယ်။ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ သေချာရေးပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူးတင်သလို Handy Web ရဲ့ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း recommend လုပ်ပါတယ်။
-S Minthu Oo, Admin, www.entrepreneurs-mm.com
ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ အချိန်တိကျသလို ကျွန်တော်လိုအပ်သလိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ အများအားဖြင့် ကျွန်တော်တိုဘာသာပြန်တဲ့အကြောင်းတွေက သာမန်ပြည်သူတွေ ဖတ်ရှု့ရင် နားလည်ဖို့လိုတဲ့ စာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Handy Web translation ၀န်ဆောင်မှုကတော့ ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။
-Dr. Bo Bo Hein, Program Manager, PACT Myanmar INGO